China Ejiri Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mbadamba China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mbadamba - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mbadamba)
Ụlọ ọrụ gas na-acha ọkụ ọkụ 130W 15600LM
Ụlọ ọrụ gas anyị Light Station Fit bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Gas Station Light Fixtures 130w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ogwurugwu Gas Station Light Fitting nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ụlọ anyị na- ekpuchi ikuku na-eduzi ọkụ bụ...
150W Ngwá Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ 150W Na-enwu bụ 130lm / w na 19500 lumens. Anyị 150w High Bay na-enwu gbaa Amazon nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ebube dị elu maka nke a High Bay Fixture 150W bụ 5-7m. Mmiri ọkụ ọkụ a dị elu bụ CE ROHS ETL DLC. Elu mmiri ọkụ nz eji mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe omumu,...
100w E40 Ụlọ ahịa Zuru ìhè 130lm / w
100w E40 Ụlọ ahịa Ejiri ìhè 130lm / w , BBier High-Tech Lighting bụ soplaị nke elu mma n'èzí / ime ụlọ na ada ubi ọkụ usoro na ngwọta maka oru gị. E40 Ụlọ ahịa ọkụ Led 100w bụ ihe ngwọta dị mfe maka ime ụlọ na n'èzí ebe ọkụ ọkụ dị na ngwa ahia na azụmahịa. Ụlọ nkwakọba ihe E40 Ụlọ ahịa 100w Na-enye ìhè 130lm /...
150W Mwube Ume Ime Ụlọ 19500LM
Ụlọ ọkụ ọkụ nke 150W Vancouver bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ọkụ ọkụ ụlọ anyị 150w Canada nwere ike dochie 400W HPS MH HID. The echichi elu maka nke a nkwakọba Lighting Design bụ 5-7m. Ụkpụrụ ọkụ ụlọ a bụ EC ROHS ETL DLC. Ụdị ọkụ ọkụ ụlọ nkwakọba ihe eji mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe omumu,...
150w Ụlọ ahịa ọkụ ọkụ azụ ahịa
Ihe Ngwá Ọrụ Ụlọ Ọrụ 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ anyị 150w nwere ike dochie 400W HPS MH HID. The echichi elu maka nke a nkwakọba Lighting Bulbs bụ 5-7m. Nke a na-eme ka ọkụ milwaukee wi eji mee ihe maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe omumu, nkwọ ụgbọala na wdg. Anyị bụ ụlọ ọkụ ọkụ...
150W Ụlọ nkwakọba ihe mere ka ihe nkedo ihe ngosi
Ngwá Ọrụ Led Fiji 150W bụ 130lm / w na 19500 lumens. Anyị ọkụ ọkụ n'emekere 150w nwere ike dochie 400W HPS MH HID. Ejiri ewelite maka nke a bụ ihe mgbochi Motion Motion bụ 5-7m. Ejila singapore ọkụ ụlọ a maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọrụ, nchara ụgbọala na wdg. Anyị bụ ụlọ nkwakọba ihe ọkụ ọkụ...
100w E40 Ụlọ nkwakọba ihe mere ìhè 130lm / w
100w E40 Ụlọ nkwakọba ihe Enwuru ọkụ 130lm / w , BBier High-Tech Lighting bụ onye na-ebu ígwè nke dị elu na ime ụlọ na ọkụ ọkụ usoro na ngwọta maka oru gị. E40 Ụlọ nkwakọba ihe 100w Mee ìhè 130lm / w bụ ihe ngwọta dị mfe maka ime ụlọ na n'èzí ebe ọkụ ọkụ dị na ngwa ahia na azụmahịa. Ụlọ nkwakọba ihe E40 Ụlọ...
Ejiri Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mbadamba Ejiri Ogige Uhie Na-acha Ejiri Ọkụ Kpịlị Kwara Ejiri Uhie Ụlọ Ahịa 200w Ebube Ụlọ Ahịa Canada Ufo Ụlọ Nzukọ Uhie Echere Ụlọ Ahịa maka Ahịa Ọwa Ụlọ Ahịa Canada